Maleeshiyadii Ay Beesha Dhebayaco Geysey Bandiiradley Iyo Saaxo Dhexdooda Oo 28 Nin Lagadiley – Codka Qaranka Tanadland
Hadayba intaas sameeyeen idihii Habar-majeerteen oo barida waaweynaa allaylehe ged aan lagu aqaoon bay la soo bexeen!!.— By: Saxardiid
Maleeshiyadii Ay Beesha Dhebayaco Geysey Bandiiradley Iyo Saaxo Dhexdooda Oo 28 Nin Lagadiley Fariisintoodiina Laga Qabsaday, Firxad Koodiina Sidii Loo Cayrsanayey Tuulada Saaxo Looga Reebay.
Waxaan idiin hayaa war xaqiiqo ah oo ku saabsan sida loo xasuuqay maleeshiyadii beesha dhebayaco, ee ay geeyeen degaanka u dhexeeya Bandiiradley iyo Saaxo. Sababta keentay ciidan soo duuley oo dhul hawd ah degen, in mudo gaaban xasuuqa intaas baaxad le’eg loo geysto. Dhaawaca meel la kala dhigo la waayey, oo tan iyo Garoowe daadsanna waxa kalifay ayuu maqaalkaani ku saabsanyahay. Waxaan kaloo idiinkaga waramayaa sababta firxadkii maleeshiyada beesha dhebayaco ee sida xun dagaalka loogu jebiyey, ku kaliftay inay dumarka iyo caruurta tuulada Saaxo ay gadaal ka maraan.
Sideedaba run ahaantii Dhebayaco reerka la yiraahdo dhaqanka idaha ayey leeyihiin, bari weyn bay leeyihiin oo markii ay xabadda dhawaaqeeda maqlaan ay ka balaq-balaq siiyaan. Baridooda waxa raga tusay oo markasta loo hadal hayaa waxa weeye, waa niman aad u nugul oo marka ay rag isqabtaan durba dhabarka jeedsha. Sidaad ogtihiin beesha dhebayaco cadaadis xun baa saaran oo aysan xamilikarin. Bisha aysan beesha (Muumin Aadan) dhebayaco 5 nin ilaa afar nin aysan ka dilin, laasim waxaa ah inay 4 ilaa 5 nin ay ka curyaamiyaan. Hada tirada dhebayacada ay beesha (MA) ku dileen gobalaka Mudug, waa ay ka badantahay 250 nin intii isbahaysiga mahbarka iyo midiidinkooda la sameeyey. Hadana waxaa la orankaraa mahbarka gobalka mudug degan qoys aanay cida (MA) aabahood, waalahood iyo adeeradood aysan layn maba uu jiro.
Cida MA marka ay xifaalaynayaan dhebayacada waxay yiraahdaan ” Ninka Dhebayaco marka uu qori qaato oo uu yiraahdo waa an aarsanayaa”, naagtiisa ama dumarka caa’iladiisa ah ayaa qoriga ka qaada oo ku yiraahda”War hana rogin nimankaasi haday idinku kacaan wax idinka ay harimayaane”. Laakiin docda kale nimanka hadaan libintooda u qiro, Dhebayaco waxay habaar ku qabtaa oo ay caan ku tahay iskudirka iyo wixii munaafaqad ah oo dhan. Bal idinkuba xisaabsha inta jeer ee ay beel ku soo xerogeliyeen walaalaynu nahay, markay dantii ay ka lahaayeen ay ka gaareen oo debinkii ay la rabeen ay ku hubsadeena, iyagoo ceel ka dhex-qaylinaya oo walaalowda haya ay ka dhaqaaqeen.
Dagaalka (Sacad) Iyo Dhebayaco Asbaabihii Uu Ka Dhashay:
Dadka badankoodu siday aaminsanyihiin duulaanka gardarada ah ee lagu qaaday beesha (Sacad) waxaa u sabab ah (Cabdi Qybdiid). Sababta oo ay tahay (Cabdi Qybdiid) intii uu beeshiisa hogaanka u qabtayba weerar ayey dhebayaco ku haysey. Ninka (Cabdi Qaybdiid) la yiraahdana waa nin jilicsan oo hogaamintiisa uu tolkiis eeday. Mar kasta oo u afka kala qaado nabad iyo wax aan arada oolin un buu hadalhayaa, tolkiisna weerar joogto ah ayaa laguhayaa oo gardaro ah. Dhebayaco kibirka ay kibirtey heer wuxuu gaarey ay yiraahdaan magaalada Gaalkacyaba kama u soo degikaro.
Duulaanka gardarada ah ee beesha Dhebayaco ay ku qaaday beesha (Sacad) sida xunna loogu jebiyey. Horay ayey mid la mid ah beesha dhebayaco ay Sacad ugu qaadeen. Duulaankaas beesha dhebayaco waxay u adeegsatey beesha Sure-Dir. Beesha dhebayaco maadaama aysan Sacad toos u abaarikarin waxay ka shaqaysay inay isku dirto beelaha Sacad iyo Sure. Dhebayaco beesha Sure waxay ku hodey beentii reerka Harti la yiraahdo ay ku haligtey oo ay eedeen. Sida Hay’ado idin caawiya ayaan idiin keeneynaa, Mashaariic baan idiin keeneynaa, tuulo hebel baanu degmo idiinkaga dhigaynaa IWM. Beelaha (Dir) iyo (Sacad) waa isku degaan marka dhebayaco tuulada (Towqiif) oo labadaas beelood ay wadadegaan ayey waxay yiraahdeen anagaa ka talina. Intaasna kuma aysan ekaan ee waxay damceen inay maleeshiyo beeleedkooda ay geeyaan. Arintaasi waxay sababtay in uu dhaco dagaal yar oo lagu jebiyey ayna ku quusteen gunta habar-majeerteen.
Dagaalkii doraad oo ay taariikhdu ahayd (24/12/2014) ka dhacay degaanka u dhexeeya Bandiiradley iyo Saaxo, wuxuu ka dhashay munaafaqad ka weyn tii tuulada Towfiiq ka dhacday. Ujeedada kowaad waxay ahayd in Sade dhexdiisa laysku diro oo Beesha Sade ee gobalada dhexe la kala qaybiyo. Iyada oo ay ujeedadu tahay in beesha Wagardhac la go’doomiyo tolkoodna laga faquuqo. Markaas kedibna beesha Wagardhac loo adeegsado iskudhufashada beelaha Sade iyo Sacad. Sidaad ogtihiin dhebayaco beesha Wagardhac waxay u geysey mashruucii horay u fashilmay ee Tawfiiq. Waxay kaloo beesha dhebayaco si uu dagaal u dhaco ay geeyeen mooryaantooda dhulka xoolodaaqeenka ah ee u dhexeeya Bandiiradley iyo Saaxo.
Markay ogaatey beesha Sacad in lagu soo duuley oo ciidan la soo duldhigay, ayey duulaan aroor hore waxay ku ekeeyeen fariisintii beesha Dhebayaco ciidankoodu ay fadhiyeen. Meeshaas Dhebayaco dagaal si xun loogu jebiyey baa ka dhacay. Isla goobtii uu dagaalku ka dhacay dhebayaco waxaa loogadiley 25 nin. Waana la baqo eryey oo sidii loo cayrsanayey firxadkoodii tuulada saaxo ayey galeen. Laakiin arinta dad badan layaabka ku noqotay waxa weeye, Dhebayaco dhaawaceeda qaadata weligeed ma inaan maqal maanta ka horow. Taas waxaa kaaga siidaran, Dhebayacadu 54 nin oo dhaawac ah ayey la carareen oo ay la tageen iyaga oo wata tuulada Saaxo.
Hadayba intaas sameeyeen idihii Habar-majeerteen oo barida waaweynaa allaylehe ged aan lagu aqaoon bay la soo bexeen!!.
Dhebayaco iyada oo la cayrsanayo markii ay orod ku galeen tuulada Saaxo, ayaa waxaa ka reebay beesha Wagardhac. Dhaawaca maxaysatada Mahbarka ee dagaalka lagu soo jebiyey ayaa hada wuxuu daadsanyahay ilaa iyo Garoowe. Tirada mahbarka dagaalka uga dhimatayna hada waxay maraysaa 28 nin, waxaana la soo sheegay in dhaawiciii 3 nin ay ka dhimatay. Marka hada ah labada ciidan waxay isku horfadhiyaan tuulada Saaxo meel banaan keeda ah. Labada ciidan ee is horfadhiya hada waxay ku jiraan ciidan iyo hub urursi. Wararkii ugu danbeeyeyna waxay sheegayaan in beesha dhebayaco oo dagaalkii doraad dhacay sida xun loogu jebiyey. Inay shalay xoogaa maleeshiyo ah ay geysey tuulada Saaxo si ay dagaalka uga qaybqaataan.
Hadayba intaas sameeyeen idihii Habar-majeerteen oo barida waaweynaa allaylehe ged aan lagu aqaoon bay la soo bexeen!!. By: Saxardiid
Arinta ugu qosolka badan oo maada noqotay waxa weeye in nimankii weerarka bilaabay oo sida xun loo xasuuqay, inay ku andacoodeen in la gaaday oo iyaga oo hur-hurda la weeraray. Markaas ayaa waxaa laguyiri “War waxaas hadii laydinkamaqlo waa laydinku qoslayaaye waxaad tiraahdaan sidiinii waanu tukaneyney!!”. Hada alaladka iyo taaha galbeedka israac ka baxaya ayaa Gaalkacyo laga seexanlayahay iyaga oo leh “War baridaa iigudaran oo si’aan u seexdaan la’ahay!!”.
Hadii aan saadaal ka bixiyo ciidamada is horfadhiya ee dhebayaco iyo Sacad, wax isudhigma iyo wax lays barbar dhigikaro midna maaha. Anigu dagaaladii gobalka mudug ka dhacay sagaashameeyadii waan joogey, kuwii koonfurta soomaaliya ka dhacayna waan u soo taagnaa. Ragii hore ee reer Tanadland waxay oranjireen Dhebayaco “Waa ugaar” oo sidii ugaartii bay u didaan. Laakiin aniga aragtidayda Dhebayaco waa iska ido. Arinta dad badani ay isweydiinayaan oo lala yaabanyahay waxa weeye “Nimankii beesha Sacad ee dhebayaco weeraray see ayey dhebayaco uga baxsatay?, oo ay dhebayaco ugu soorogashay inay dhaawacooda qaataan?”. Sacad waa u ogaa inaysan Dhebayaco lahayn karti ay ugu babac dhigaan oo ay kala firxanayaan marka ay xabaddu qaraxdo.